सेल्टल्ट समीक्षा: गैर-कोडकर्ताहरूको लागि लाभकारी वेब स्क्रैपिंग सेवा
गैर-प्राविधिक व्यक्ति हुनु भएको बेला, तपाईं छनौट गर्नुहुँदा केही अवरोधहरू गर्न सक्नुहुन्छ। लाभदायक वेब स्क्रैपिंग सेवा. यो सत्य हो कि इन्टरनेटमा धेरै कार्यक्रमहरू छन्. ती मध्ये केहि इमेल ठेगानाबाट डेटा निकाल्दा अरूले समाचार आउटलेट, यात्रा साइटहरू, र सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू लक्षित गर्छन्. निम्न डाटा निष्कर्षण कार्यक्रमहरू विशेष रूपमा गैर-कोडकहरूका लागि डिजाइन गरिएका छन् र मानिसहरू जसले सी ++ जस्ता प्रोग्रामिङ भाषाहरूबाट टाढा राख्न चाहन्छन् जुन उनीहरूको कार्यहरू पूरा गर्दै.
यो गैर-कोडकहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा फायदेमंद वेब स्क्रैपिंग सेवा हो।. Spinn3r को विशेषता यो हो कि यो तपाईंको सम्पूर्ण वेबसाइट स्क्रैप र निजी ब्लग्स, सोशल मीडिया र आरएसएस फीड्स देखि डेटा निकालन सक्छ।. यो Firehose API को उपयोग गर्दछ र 80 प्रतिशत देखि अधिक अनुक्रमणिका र इन्टरनेट मा क्रल गर्ने प्रबन्ध गर्दछ. यसको अतिरिक्त, Spinn3r हटाइएको जानकारी JSON फारममा बचत गर्दछ र Google सँग समान गुणहरू छन्. यसले तपाइँका डेटासेटहरू अनुसार तपाईंको डाटासेटहरू स्क्यान र अद्यावधिक गर्दछ र कच्ची डेटामा खोज गर्दछ, तपाइँलाई उच्च-गुणस्तर र राम्ररी संरचित जानकारी सजिलै प्राप्त गर्दैछ।.
अक्टोपर्स उन डेटा को स्क्रैपिंग सेवाहरु मध्ये एक हो जुन कन्फिगर गर्न आसान छ. यो यसको प्रयोगकर्ता-अनुकूल र बकाया इन्टरफेसको लागि व्यापक रूपमा जानिन्छ. अक्टोपारेले तपाईंलाई सजिलो वेब पेजबाट डेटा स्क्रैप गर्न र मानव प्रयोगकर्तालाई जानकारी निकाल्दै गर्दा विभिन्न साइटहरू र ब्लगहरू लक्ष्यीकरण गर्न सजिलो बनाउँदछ।. अक्टोपारले तपाईंलाई क्लाउडमा निकालेको डाटा बचत गर्न वा स्थानीय मेसिनमा डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ.
3. पार्स हब
अन्य प्रसिद्ध डेटा निष्कर्षण सेवाहरु जस्तै, पेसहेब्यू एक विश्वसनीय र नि: शुल्क सेवा हो जुन ठूलो संख्या मा साइटहरु लाई लक्षित गर्दछ र रीडायरेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट, AJAX, र कुकीज को उपयोग गर्दछ।. यसबाहेक, यस कार्यक्रमलाई उन्नत मेसिन सिकाइ टेक्नोलोजीसँग लैजान सकिन्छ र एक राम्रो तरिकामा पीडीएफ कागजातहरू पढ्न र मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ. हाल, विन्डोज र लिनक्स प्रयोगकर्ताहरूले Parsehub प्रयोग गर्न सक्छन्, र यसले 30 मिनेटमा बहुविध कार्यहरू पूरा गर्न सक्छ.
फिनर प्रोग्रामहरू स्क्रैपिंग सबैभन्दा सबैभन्दा फायदेमंद डेटा हो. यसले विश्व-स्तरीय विशिष्टताहरूलाई जोड्दछ र स्क्रैप गरिएको बेला तपाईंको डेटाको दृश्यलाई अनुमति दिन्छ. Fminer सरल र जटिल दुवै साइटहरु बाट जानकारी प्राप्त गर्दछ र कुनै पनि प्रोग्रामिंग कौशल को आवश्यकता छैन. यदि तपाइँ प्राविधिक ज्ञानको कमी छ भने, फिनर तपाईंको लागि सही कार्यक्रम हो.
यो शक्तिशाली शक्तिशाली फायरफक्स एक्स्टेन्सन हो जुन तपाईले डाउनलोड गर्न र नियमित फायरफक्स एड-अनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।. Outwit Hub सबै भन्दा राम्रो र सबैभन्दा अचम्मलाग्दो डेटा निष्कर्षण उपकरण हो. यसले तपाईको ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्न सजिलो बनाउँदछ, यो डेटा सङ्कलन गर्दछ र डेटा स्क्रैप गर्दछ तर विभिन्न वेब पृष्ठहरू क्रल गर्दछ. बाहिरको बक्स बन्नु, यो कार्यक्रमलाई कुनै प्रोग्रामिंग क्षमताको आवश्यकता छैन र प्रयोग गर्न सजिलो छ.
6. वेब स्क्रैपर - एक क्रोम एक्सटेन्सन
यो उच्च गुणस्तरका सुविधाहरू र गुणहरूसँग एक प्रसिद्ध Google क्रोम एक्सटेन्सन हो. वेब स्क्रैर आयात गर्न एक राम्रो विकल्प हो. io र कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टमसँग एकीकृत हुन सक्छ. तपाईंले भर्खरैको डाटालाई स्क्रैप गर्न खोज्नु भएको छ र वेब स्क्रैपरले यसलाई हटाउन र यसलाई परिवर्तन गर्नेछ, तपाईलाई सबै भन्दा राम्रो सम्भावित परिणाम दिँदै. यसले जाभास्क्रिप्ट र अजाक्समा वेबसाइटहरू हटाउँछ र गैर-प्रविधि व्यक्तिहरूको लागि सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यक्रम हो Source .